Sekoly FJKM/ Hetsika Tetikasa « Mahay » – FJKM
Sekoly FJKM/ Hetsika Tetikasa « Mahay »
Nanolotra fitaovana ho an’ny ankizy sy ny sekoly any Moramanga
Ny 03 Desambra 2018 no andro iraisam-pirenena ho an’ny olona manana fahasembanana. Nanamarika izany tao amin’ny Lycée FJKM Moramanga ny Tetikasa Mahay tantanin’ny Departemantan’ny Sekoly FJKM ka nanolotra fitaovana ho an’ny sekoly mpiara-miasa aminy any an-toerana sy ireo ankizy mpahazo tombontsoa 7 avy amin’ny Lycée FJKM Moramanga, 7 avy amin’ny Sekoly FJKM Antsirinala ary 29 avy amin’ny EPP Moramanga ambony.
Ity Tetikasa MAHAY – Fanabeazana Mampiaty ity dia ezaka atao ho fampidirana an-tsekoly ireo ankizy manana fahasembanana, kanefa tsy natao hiditra an-tsekoly fotsiny ihany izy ireo fa natao hiaty mba tsy ho voahilika amin’ny fiaraha-monin’ny ankizy rehetra tahaka azy, ary koa natao hivoatra araka ny fahasehany avy, izany hoe samy hanana izay zava-bitany araka ny heriny avy ny ankizy tsirairay.
Amin’ny ankapobeny mantsy dia sekoly manokana no nandray ireny ankizy tratran’ny fahasembanana ara-batana ireny hatramin’izay, na noraisin’ny sekoly hafa ihany saingy nomena toerana sy fampianarana manokana. Ankehitriny kosa dia tsapa fa ity fanabeazana mampiaty ity no manamora kokoa ny fandraisan’ny fiaraha-monina ireny ankizy ireny dieny any an-tsekoly ka hitohy hatrany amin’ny fahatanorany any anatin’ny sehatry ny asa. Mpanohana izao tetikasa izao ny CBM na ny Christoffel Blinden Mission.
Ankoatra an’i Moramanga dia miasa amin’ny faritra Analamanga sy Atsinanana ary Vakinankaratra ny tetikasa Mahay – Fanabeazana Mampiaty ka mpanabe miisa 156 nahavita fiofanana no misahana ireo faritra ireo.
Ho fampandrosoana ny asa dia nanazava Ramatoa Rafenomiadana Mbolamamy, Mpanatanteraka ao amin’ny tetikasa, fa hamafisina ny fampiofanana ny mpanabe mba hitombo isa izy ireo, hampitomboina ihany koa ny fampitaovana ny sekoly sy ny ankizy ary ny fijerena manokana ny fahasalaman’izy ireo.
Ho tanterahina amin’ny fiandohan’ny taona 2019 araka izany ny fampiofanana ireo mpanabe momba ny karazam-pahasembanana sy ny fomba fiatrehana izany ary momba ny tenin’ny tanana.